MAXAA MARKAA LAGU BEERAY BEERTA: QORSHAYNTA KARTIDA LEH EE DALAGYADA DALAGYADA BEERTA - BEER CAGAARAN
Cagaarka dalagyada khudradda: waxa loo abuuro wixii ka dambeeya, sida loo qorsheeyo dalagyada si sax ah
Xagaaga xagaaga oo dhan way ogyihiin in haddii dhowr sanadood oo isku xigta ay ku beeraan dalagyo isku mid ah isla goobtaas, ka dibna xitaa xaalado isku mid ah oo daryeel ah, waxay noqdaan kuwo badan oo khalkhal galiya sannad walba, miro ayaana ka sii daraya. Xaaladda Tani waxay sababtay hoos u dhigista ciidda, taas oo, taas oo ay sabab u tahay dhowr arrimood.
Muhiimada qorsheynta dalagga ee wanaagsan
Marka hore waa in cudurada iyo noocyada kala duwan ee cayayaanku ku ururaan ciidda. Tusaale ahaan, baradhada waxaa loo yaqaanaa raaxo jecel. Lamaanadaha Colorado. Haddii beeritaanka dalaggu uusan badaleynin meeshii dhowr sano, ma jirto baahi loo qabo cayayaanku si ay u raadsadaan cunto - ka dib xilliga jiilaalka wuxuu si dhakhso ah u helaa xaaladaha wanaagsan isla markiiba wuxuu bilaabaa inuu burburiyo geedka. Intaa waxaa dheer in baradho baradho Colorado, baradho beerto waxay gacan ka geysanaysaa isku dhafka ah ee jiritaanka gariir goor dambe oo guji dirxiga iyo dirxiga aboor ee ciidda.
Iyada oo dhaqamada kale, xaalada ayaa sidan u korodhsan. On a qorshe ah lagu beeray dalag isku mid ah, tirada cayayaanka ayaa kordhin doona sanadka oo dhan.taas oo halis u ah iyada iyo, si waafaqsan, waxay noqon doontaa iyo aad u adag tahay warshadda si ay u hor istaagaan duullaan noocaas ah. Gaar ahaan waxay saameeyeen arrintan waa kaabajka, yaanyada, qajaarka, celery, digir, salaar. Midda labaad waxay kor u qaadaysaa walxaha waxyeellada leh ee qarsoodi ah ee xididdada dhaqanka gaarka ah (koloko loo yaqaan) iyo kuwa sunta ah ee laftiisa. Qaar ka mid ah dhirta ayaa si aad ah ugu nugul saamaynta sunta sida (tusaale ahaan, xididdo iyo isbinaajo), kuwa kale way u adkahay (karootada, bocorka, radishes, dhir), kuwa kale waxay ku dhow yihiin inayan falcelin suubin (dhoobo, saymo, galley). Intaa waxaa dheer, dhir kala duwan ayaa bixiya xaddi kala duwan oo ka mid ah walxaha waxyeelada leh, tusaale ahaan, gaar ahaan badan oo iyaga ka mid ah ciidda ka dib qajaarka, karootada iyo kaabajka.
Saddexaad waa dhumucda nafaqada ee ciidda. Dhaqan kastaa wuxuu leeyahay nafaqo u gaar ah oo loo baahan yahay horumarinta caadiga ah. Way cadahay in ay tahay dhirta waxayna isku dayi doonaan inay ka soo saaraan ciidda. Tusaale ahaan, haddii kaabashku aad u badan yahay baahida potassium, ka dib marka la beerto it this ee ciidda ku sii jiri doonaa ka yar iyo ka yar, halka, dheh, ka dib dabocase, kaydka potassium lama dhicin si deg deg ah.
Way sahlan tahay in la fahmo in xaalada lagu saxi karo iyada oo la isugaynayo dhaqamada lagu beeray goobta ilaa sannad illaa. Nidaamkani wuxuu leeyahay magaca dalagga beeraha, waana saynis dhan. Si kastaba ha noqotee, haddii aysan jirin wakhti ay ku qaadato tababarka kakan ee kakan, waa ku filan in la barto xeerar asaasi ah, iyo goosashada goobtaada aad marwalba noqon doonto mid isku mid ah.
Nidaamka Rule 1
Midba midka kale, macquul ma aha in la abuuro oo keliya dhaqanka isku mid ah dhowr sano oo isku xigta, laakiin sidoo kale sidoo kale qaraabada dhow (wakiilada noocyada isku midka ah), sida caadiga ah waxay leeyihiin cayayaanka caadiga ah, waxay falcelin ku sameeyaan sunta isku isku mid ah waxayna isticmaalaan hal isku dhafan oo ku saabsan qaybaha raadka.
Nidaamka Rule 2
Celceliska muddada uu dhulka ku jirayo waa in la nastaa ka dib dhaqanku waa laba sano. (hal sanno caadi ahaan ma ahan mid ku filan soo kabashada buuxda), laakiin dhirta dhirta qaarkood muddo dheer ayey u dheer tahay. Sidaa darteed, karootada, qajaarka, dhirta, xididdo, waa inaan dib ugu celin meeshoodii hore ugu yaraan 4 sano, iyo marka la eego kaabajka waxay u fiicantahay in la adkeeyo 7 sano oo dhan! Wakhtiyadaas waa la kordhin karaa, laakiin waa lagama maarmaan in la yareeyo.
Nidaamka Rule 3
Geedaha ma aha oo kaliya in ay isticmaalaan waxyaabaha raadka ka soo ciidda, laakiin sidoo kale si ay u kobciyaan iyada oo leh walaxyo waxtar leh iyo guryaha. Sidaa darteed Dhaqdhaqaaqa saxda ah ee saxda ah wuxuu u oggolaan karaa ma aha oo keliya in la ilaaliyo walxaha gaar ahaan muhiim u ah dhirta, laakiin sidoo kale si loo hagaajiyo hannaanka ciidda iyo dhismaha iyadoon hannaanka dheeraadka ah. Tusaale ahaan, digirta waxay dabacsan yihiin ciidda waxayna ku kobcinayaan macdano badan. Qoob-ka iyo bajabku waxay ku buuxsamaan ciidda leh calcium, datura-cawska - oo leh fosfooraska, tubaakada - oo leh potassium, marin-dioecious - oo leh birta. Ogaanshaha sharciyadan fudud iyo tixgelinta baahida noocyo kala duwan oo dalagyo ah oo loogu talagalay maadooyin kala duwan, way sahlan tahay in la qorsheeyo dalagyada dhowr sano ka hor. By habka, sifooyinka gaarka ah ee dalagyada liiska loo isticmaali karo si buuxda, iyaga oo ku ridaya compost ka dib goosashada.
Xeerkani wuxuu khuseeyaa cayayaanka. Waxaa jira dhaqamo aan u adkeysan karin cudurrada qaarkood, laakiin sidoo kale waxay iska ilaaliyaan jirkooda. Tusaale ahaan, aphids uma dulqaadan karaan dhirta sida toonta ama tobaakada. Thyme wuxuu ka baqayaa jiritaanka baradiidka Colorado. Haddii aad geedo noocyo kala duwan ah u sameyso ka dib marka dhirta ay soo gaarto cayayaankaas, waxaa jira fursad wanaagsan oo looga saarayo goobta, iyada oo lagu sii daayo beeritaanka sannadaha soo socda.
Lambarka talaabada 4
Baahida loo qabo dhirta ku jirta qaybaha nafaqada way kala duwan yihiin. Waa wax aan suurtagal ahayn in la beero midba midka kale ka dibna dalbado ka kooban halabuurka ciidda. Waa saxan tahay in dhirta lagu beero ka dib marka dalagga dalagga ama dalbashada lakabka bacriga loo baahan yahay.
Sidaa daraadeed, isbeddelka saxda ah ee dalaggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka fogaato hal dhinac oo isku dhafan oo ka mid ah qodobada isku midka ah ee ciidda, kordhinta diiradda noocyada cayayaannada iyo bakteeriyada cudurada, iyo sidoo kale culeys aan cidhiidhi ahayn oo ka yimaada ciidda nidaamka xididada ee dhirta.
Sabab kale oo ka dhigaysa in loo baahdo in lagu wareejiyo dalagyada dhulkuna waa xakamaynta. Waxaa jira dhirro u nugul xaafaddan (tusaale ahaan, toonta, basasha, dabacasaha, dhir, dhoobo), waxaa ugu wanaagsan in la beeray kadib dalagyada ka baxa qiyaas yar oo qashin ah. Dhirta waxaa ka mid ah yaanyada, digirta, baradhada, kaabajka.
Ka dib markaa dhirta
Sidaa daraadeed, waxaan ogaanay in dalagga dalagga uu yahay hab daruuri ah oo habboon, taas oo u ogolaanaysa ilaalinta bacriminta carrada iyo xaqiijinta dhalidda isku dhafan. Hase yeeshee, baahida loo qabo dalagyo kala duwan oo loo yaqaan microelements, Bacriminta iyo xaaladaha kale way ka duwan yihiin, aqoonta xeerarka iyo mabaadi'da caadiga ah ma ogola in ay si sax ah u go'aamiyaan dhirta ay ku beddelan karaan bedelkooda.
Ma taqaanaa? Waxaa jira laba qawaan oo fudud oo jadwalka soo socda. Marka hore, ha matalin wakiillada kale ee isku qoys. Tusaale ahaan, labadaba yaanyada iyo baradhada labaduba waa kuwo cad; Iyo karootada, iyo dill - dallad this. Marka labaad, dhirta ay tahay qaybta kore ee la cuno waa in la beddelaa kuwa xididada ("dushooda iyo xididdada") qiimo leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo in tani ay tahay xukunka ugu horreeya, waana in loo adeegsadaa oo keliya hadii macluumaad dheeraad ah ama yar oo sax ah aan laga heli karin sababo kale ama mid kale.
Ka dib markaa sariiraha sariirta, waxaad ka baran kartaa miisaska tirooyinka badan oo ay soo saareen Faa'iidooyinka iyo hiitaarada. Kuwa aan doonayn in ay baraan aragtida iyo raadinta jawaabo sahlan ee su'aalaha ku saabsan dalagyada gaarka ah, hoos ku qoran waa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan waxa khudaarta si ay u baxaan ka dib.
Maxaa la beeray ka dib markii kaabash
Kaabashka waxaa lagu soo bandhigay noocyo kala duwan oo cayayaanka iyo cudurada, sidaa daraadeed, ka jawaabista su'aasha ah waxa dhirta kaddib marka sannadka soo socda, beerta kasta waxay ku kalsoon tahay kali ah: kaliya ma aha kaabaj, xataa haddii aan ka hadleyno qaababka kale! Tani waa ikhtiyaarka ugu xun ee la maleyn karo, laakiin haddii aysan jirin wax kale, carrada waa inay noqotaa mid aad u wanaagsan.
Kaabashka sida ka hor doorasho ma ku habboon dalagyada sida dabocase, rutabaga iyo turnips, tan iyo dhirta kuwani waa cuntada ugu jecel cayayaanka isku mid ah.
Hag u ah basasha ama toonta ka dib kaabajka. Karootada, celery, baradhada, xididdo, qajaarka, yaanyada ayaa loo ogol yahay. Iyada oo khudradda, kaabajka, iyo sidoo kale, ayaa si fiican u helo xaafadda, tan iyo kiiskan waa waxyeello ka soo gaartay cudurada iyo cayayaanka waxyeello leh. Laakiin soo socda si yaanyada, digirta, dhir iyo yaanyo, kaabajka hore ee, waa in aadan beeran. Baradhada, radishes, qajaarka, dabacasaha, digirta, basasha, toon, iyo sidoo kale caleemaha sanadlaha ah ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo ka soo horjeeda kaabajka.
Waxa la siinayo ka dib markii toon
Garlic, iyo sidoo kale basasha, laguma talinayo in la beeray waqti dheer meel isku mid ah, iyo sidoo kale midba midka kale. Maxaa la beeray karaa toonta beerta, sidaas darteed waa baradho, gaar ahaan bislaado. Doorasho sax ah sidoo kale waa yaanyada, qajaarka, digirta, xididdo, ama kaabajka.
Laakiin waxaa ugu wanaagsan in la soo saaro geedo sanadle ah oo toon ah iyo basasha, kuwaas oo ujeedadoodu tahay soo celinta ciidda loogu talagalay isticmaalka dambe, buuxi kaydka macdanta iyo burburinta haramaha. Mustard, phacelia, noocyo kala duwan oo ah digir cagaaran, galley, iyo kufsigu si fiican u qabtaan doorashadan.
Waxa la siinayo ka dib qajaarka
Qajaarka ayaa badanaa dalbanaya halbeegga ciidda marka loo eego dalagyada kale ee badan. Ciidda ka hor beerashada waa sida caadiga ah si gaar ah si taxadar leh loo labanlaabay dharka organic iyo macdanta labadaba. Laga soo bilaabo tani waxay raacdaa in beerto ka dib markii qajaarka ee sanadka soo socda waa in ay ahaato wax xajis ah. Tusaale ahaan, kaabajku maaha mid ku haboon ujeedooyinkaas; sidoo kale wuxuu u baahan yahay ciid wanaagsan. Ku fiicantahay goobta ay ku koraan qajaarka, khudradda kala duwan ee rootiyada - xididdo, radishes, gego, karootada, dhir, celery. Si loo wanaajiyo habka ciidda ka dib qajaarka, waxaa suurtagal ah in la beero digirta oo kaliya markaa kadibna isticmaasho dalagyada kale ee khudradda, tusaale ahaan, basasha, baradhada, yaanyada, hadhuudh, salaar.
Waa muhiim! Carrabku waa mid bacrin ah maaha oo kaliya sababtoo ah joogitaanka koox gaar ah oo raad raac ah. Xaaladda lagama maarmaanka u ah waa abuurista dabiiciga ah ee noocyada kala duwan ee noocyada jeermiska iyo noocyada kala duwan ee walxaha dabiiciga ah. Sidaa daraadeed, qalad weyn ayaa ah kalsoonida dadweynaha xagaaga in ay suurtagal tahay in dib loo soo celiyo ciidda la gooyey iyadoo aan si qalad ah u daadin baalin compost ah oo ku taal sariirta beerta iyo ka waraabinta kore ee bacriminta macdanta ah ee iibsanaya dukaanka ugu dhow.
Waxa la abuurayo ka dib strawberries
Cagaarshowgu wuxuu u muuqdaa inuu carrada aad u badan yahay, sida ugu dhakhsaha badan ka dib markii transplanting (iyo waxa fiican in la sameeyo tan afartii sano kasta) sariirta halkaas oo uu koray, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u quudiso macdanta iyo Bacriminta organic. Si fiican u samee xilliga dayrta, si taxadar leh u qodaya ciidda ka dib samaynta waxyaalahaan.
Cagaarshowgu wuxuu si gaar ah u cunaa nitrogen, sidaas darteed waxa ugu wanaagsan in la beerto digirta, digirta iyo digirta kale ka dib - waxay, sida ku xusan, u kobciyo ciidda leh arrintan.
Qalabka antifungal iyo phytoncidal ee toonta ayaa ka dhigaya caawiye wanaagsan oo lagu nadiifiyo ciidda ka soo cayayaanka ee ku jira ka dib strawberries. Isla mar ahaantaana toon, dhir, cagaar iyo cagaarka kale ee la kariyey ayaa lagu beeray halkan si looga takhaluso slugs.
Dhab ahaan, doorashooyinka beeritaanka ee sanadka soo socda ka dib markii uu strawberries ku yar yahay. Laakiin ka dib dalagyada kor ku xusan, waxaad dhali kartaa qudaar kasta - qajaarka, yaanyada, zucchini, bocor, iwm.
Waa muhiim! Raspberries iyo strawberries waa in aan la beddelin midba midka kale, sida dhirta kuwaas oo leh cayayaanka la mid ah.
Way fiicantahay in la diyaariyo beerta ubaxa ee goobta sariirta hore ee strawberry. Peonies Perennial, daffodils, tulips iyo violets ayaa ka caawin doona ciidda ka soo kabashada ka soo berry ah oo ay ku dhufatay.
Waxa la abuuro kadib baradho
Baradhadu, oo ka duwan strawberries, baabbi'iyo badan oo ah potassium iyo fosfooraska, sidaas ciidda ka dib digriiga goosashada ka maqan yahay arrimahan. Waxaad ka dhigi kartaa luminta Bacriminta macdanta, oo waxaad dhali kartaa dhalatada sanadlaha ah ee dhalin kara potassium iyo fosfooraska. Kaalintani waxay fulin kartaa ciribta cawska, cawska, miro, digir, kufsi, qaniinyo.
Haddii aysan suurtogal ahayn in si dhammaystiran u bilaashaan sawirka ka dib baradho ah sanad dhan, waxaad ku beeri kartaa bocorka on. Dalagyada kale waxay u baahan yihiin bacriminta macdanta hore si loo soo celiyo bacriminta carrada. Si kastaba ha noqotee, sida kor ku xusan, yaanyada, eggplants iyo dhaqamada kale ee bidix laguma beeri karo ka dib baradhada. Sidoo kale waxay khuseysaa basbaas.
Dadka ka soo horjirta beereedka waxay si guul leh u sameeyaan bocorka isla, zucchini, qajaarka, kaabajka, basasha.
Waxa la abuuro kadib markii yaanyo
Waxaan go'aansaday in ka dib markii yaanyada ma dhali karo eggplants, baradhada iyo basbaaska. Sida dhaqamada kale, ka dib markii yaanyada waxay ku habboon tahay in la beero sannadlaha oo buuxin doona ciidda leh xubno maqan. Haddii loogu talagalay noocan oo kale ah raaxo ma jirto wax macquul ah - maaha arrin! Beeraha, digirta iyo digirta kale waxay kaa caawinayaan buuxinta la'aanta nitrogen ee ciidda, kaabajku wuxuu sidoo kale dareemayaa fiicnaan beerta halkaas oo tamaandhada koray, sababtoo ah cayayaanka dalaggu way ka duwan yihiin. Ma jiraan wax laga hortagayo beeritaanka qajaarka, zucchini, bocorka, karootada, xididdo, saladh cagaaran, basasha, toon. Intaa waxaa dheer, yaanyada - tani waa yar, ka dib taas oo aad ku beeri karootada.
Maxaa la beeray ka dib markii dabocase
Doorashada ee waxa la beeray karaa ka dib markii xididdo ee sanadka soo socda waa mid weyn. Baradhada, yaanyada iyo habeenkii kale ayaa ku habboon ujeedadaas, laakiin ka hor inta aan la beerin caleemaha waa in si taxadar leh loo quudiyo humus ama peat. Waxaad kaloo xoqin kartaa toonta iyo basasha. Doorasho fiican waa karootiga. By habka, kuwii ka horreeyay ee dabacasaha beerta, marka lagu daro xididdo iyo yaanyo kor ku xusan, sidoo kale waa qajaarka, basasha, toonta iyo kaabajka.
Dhaqamada kor ku xusan waxay ku shaqeeyaan nidaamka ka soo horjeeda, taas oo ah, marka la eego, ka dib taas oo ka wanaagsan oo ay u wanaagsan tahay in ay beerto geedka. Waxaad ku dari kartaa kaabajka, qajaarka, zucchini, bocorka, digirta, salaar, dhir, dill, iyo celery liiska.
Maxaa la beeray karaa ka dib basbaas
Nidaamka asaasiga ah ee basbaas macaan waa in lakabyada sare ee ciidda, sidaas darteed ka dib markii ay ugu fiican tahay in la beeray dalagyada xididada qoto dheer. Waxay noqon kartaa khudaarta cagaaran (radishes, radishes, rootiga, karootada), marka laga reebo baradhada, iyo sidoo kale basasha, toon, qajaarka, digirta iyo cagaarka.
Lama oggola in la beero dhaqan kasta oo ka mid ah qoysaska nightshade ka dib markii basbaas. Waxaad ku beeri kartaa basbaaska macaan ka dib, digir, zucchini, bocorka, kaabajka, xididdo, celery.
Maxaa la beeran karaa markaad peas ka dib
Miira, sida kor ku xusan, waa arrin wanaagsan oo loogu talagalay dhaqamada badan. Sidaa darteed, awoodda warshadani waxay ku kobcinaysaa carrada leh nitrogen waxay yeelan doontaa saamayn gaar ah oo ku habboon dhalidda baradhada, yaanyada, eggplants, basbaaska, xididada, karootada, radishes, qajaarka, zucchini, squash, bocorka, qaraha, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo kaabash.
Si kastaba ha ahaatee, digirta waxay leedahay mid ka mid ah muuqaal xun: waxaa aad u nugul cudurada fangas iyo kallana xidid, gaar ahaan xaaladaha qoyaan badan. Sidaa darteed, haddii dhaqan uu saameeyey cudurkan noocan oo kale ah wuxuu ku koray goobta, sanadka soo socda midkoodna digir ama digir kale waa in lagu dhex beeray meeshan. Xannuunada cudurrada noocan oo kale ah waxay ku sii jiri karaan ciidda muddo 5-6 sano ah, sidaas awgeed xilliga sariirta oo dhan way ka fiican tahay in la isticmaalo iyada oo aan hoos u dhigin cudurrada cuduradan.
Waxa la rabo in la gooyo: miiska miisaanka cunnada khudaarta inta lagu jiro beerashada
Marka la eego ugxan-darrooyinka la jecelyahay iyo kuwa aan loo baahnayn ee dalagyada khudaarta ah, waxaa jira tiro badan oo ah xeerar guud iyo kuwo gaar ah, oo lagu soo koobay caddayn miisaan kala duwan. Waad ka hubin kartaa marka aad qorsheyneyso wareegyada u dhiganta.
Tusaale ahaan, waxaad ku biiri kartaa xeerarka wareegga dalagga sida soo socota:
Dhaqanka Hormar fiican Maqnaanshaha suurtagalka ah Madaxweynihii hore
Baradhada Bacaha, qajaarka, kaabajka Karootada, xididdo, basasha Solanaceae (yaanyada, eggplants, basbaaska)
Garlic, basasha Baradhada, karootada, digirta, qajaarka Kaabashka, Tamaandhada, Beeshiisa Basasha, toon, basbaaska, physalis
Tamaandho Kaabashka (gaar ahaan kuwa aan tayo lahayn), karootada, basasha, qajaarka, cagaarka Beetroot Mid kasta oo cadaan ah, Physalis
Pumpkin (qajaarka, zucchini, squash, bocorka) Legumes, solanaceous (baradhada, yaanyada), kaabajka, basasha Cagaarka Beerka Boco kasta
Digiraha (digir, digirta, digirta) Cagaarshow, qajaar, baradhada, kaabajka, Tamaandho Cunto-diiranka
Karootada Basasha, qajaar Dabocase, dabocase, kaabajka
Cagaarka Kaabashka, qajaarka Bacaha, baradhada, yaanyada, basasha Karootada, parsnips, celery
Eggplant Bacaha, boodhka, jiiska, qajaar, kaabajka, basasha, qaraha Beetroot Solanaceae
Faleeti Dabacad, karootada, qajaar, kaabajka, rutabagus, digirta, Basasha, toon Solanaceae, bocorka
Beetroot Baradhada, qajaar, basasha Bacaha, Tamaandhada Karootada
Kaabashka Bacaha, Solanaceae, Basasha, Garlic Salad, hadhuudh Pumpkin, rutabaga, dabacasaha, gumeysiga, radishes, bagalka
Sidaa awgeed, adigoo tixraacaya tilmaamahan, waxaad mar walba cadeyn kartaa, ka dib, taas oo, ka dib, tusaale ahaan, basasha dhirta ama beeraan sariiro ay tamaandhadu koraan.
Si kastaba ha noqotee, si sax ah u go'aami ciddii ka horeysay ee khudaarta marka laga beerto beertu maaha kaliya miiska, laakiin sidoo kale waxay barteen sharciyo.
Waa muhiim! Kuwa horay u soo horjeeda xun waa: dabocase, dabocase, dabocase iyo dabocase kaabajka (iyo waliba dhinaca kale); karootada, yaanyada iyo kaabajka - basasha, digirta - karootada iyo qajaarka, dabacasaha qajaarka iyo xididada.
Laakiin ka dib markii aad dhali karootada iyo khudaarta kale ee xididka ah, sidaas darteed waa ka dib markii toon ama basasha. Также корнеплоды хорошо растут после зелени и наоборот.
Помимо ответа на вопрос, что после чего сажать, не менее важно знать также, что с чем сажать, то есть какие культуры можно и какие нельзя сажать рядом. Xaqiiqdu waxay tahay in dhirta ay saameyn ku yeeshaan midba midka kale, taasoo noqon karta mid wanaagsan iyo mid xun. Ogaanshaha shuruucda aasaasiga ah, waxaad ka hortagi kartaa qaladaadka iyo xalinta dhibaatooyin badan oo ka hortagaya helitaanka dalagga xasilloon.
Tusaale ahaan, sida kor ku xusan, nidaamka xididka dhirta ayaa sii daynaya walxaha sunta ah ee ilaaliya dalagga ka soo baxa cudurada iyo cayayaanka. Isla mar ahaantaana, sunta noocan oo kale ah waxay wax u dhimi kartaa dhirta deriska ah, iyo, liddi ku ah, waxay siin kartaa ilaalin dheeraad ah. Sidaa darteed, colins qarsoodi by mustard waxay leeyihiin saameyn ku waxtar leh on digir, karootada iyo toon, laakiin waxay si liidata u dulqaadan by kaabajka. Ogaanshaha habdhaqankan, waa sahlan tahay in la go'aamiyo waxa aad dhali karaysid digirta iyo aadan beeran karin kaabajka.
Waa maxay dalagyada la beeray albaabka xiga
Sidaa daraadeed, beeritaanka wadaagga ah waa xeer muhiim ah wareegga dalagga, taas oo suurtogal u ah in ay si fudud u isticmaali karto goobta xaddidan ee goobta, iyo sidoo kale hagaajinta wax soo saarka beeraha. Tusaale ahaan baradhada iyo digirta ayaa ah deris weyn. Wuxuu ka ilaaliyaa cayayaan sida caleen, oo waxay buuxisaa baahidiisa nitrogen waxayna cabsiinaysaa baradiidka Colorado baradho. Ka sokow digirta, kaabajka, galleyda, isbinaajka, ukunta, ukunta, karootada, radishes, dill, iyo salad waa kuwo waxtar leh oo ku xiga baradho. Dhammaan dhirtaas waxay leeyihiin saameyn faa'iido leh goosashada baradhada, oo ka saara qoyaan ka badan ciidda. Iyo basasha iyo toonta, ku beegan agagaarka, ilaali baradho ka soo daahay dabaylo goor dambe.
By habka, toonta saameyn ku leh dhaqamada badan, sidaa darteed fursadaha ay u beerto waa ku filan. Cagaarshow waxaa loo tixgeliyaa in ay ahaato classics maaddaama dhirta ay si siman u faa'iidaystaan ​​midba midka kale: toonta wuxuu ilaaliyaa strawberries xun ee cudurrada iyo cayayaanka, iyo berry ku kordhinaysaa samaynta toono badan oo toon ah. Saameyn isku mid ah oo ku saabsan dhirta ayaa leh enzymes qarsoon by karootada: iyaga oo saamayn ku, guluubka toonta ayaa weynaaday.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku dhex shubtid toonta iyo fareemka, xaddiga fitamiin C ayaa kordhaya labadaba.
Garlic badbaadiyo ma aha oo kaliya dalagyada khudradda, sida yaanyada, xididada, qajaarka, karootada, laakiin sidoo kale ubaxyo gladiolus, carnations, shuban, iwm, ka cudurada kala duwan iyo cayayaanka (aphid, baradho malab, cockchafer). isaga for, duqsiga basasha badbaadin karaa calendula iyo chicory.
Dill iyo hadhuudhka - tani waa waxa aad ku dhali kartid xiga qajaarka, dabacasaha si fiican ula qabta digirta, nafsadda nafaqada leh - baradho, yaanyo iyo ukunta. Gourds waxay ka fiican yihiin inay si gooni ah u soo saaraan.
Sharciyo kale oo ku saabsan waxa loo beerayo sariiraha waxaa lagu soo bandhigi karaa qaab miiska:
Dhaqanka Deriska wanaagsan Deriska xun
digirta qajaarka, baradhada, kaabajka, lettuce, radishes, xididdo, yaanyo, eggplants, qaraha iyo ubaxyada digir, toon, basasha
digir kaabajka, salaar, karootada, radishes digirta, baradhada, toonta, basasha, yaanyada
strawberry duurjoogta ah toon, basal, salaar, dabocase
qajaarka digirta, toonta, kaabajka, lettuce, celery, basasha, cagaarka yaanyada, radishes, baradhada, zucchini
baradhada digirta, basasha, toonta, kaabajka, eggplants, malayga, karootada, dill, salad yaanyada, digir, gabbaldayaha
kaabajka digir, qajaarka, baradhada, salaarada, radishes, xididdo toon, basal, yaanyo
beetroot qajaarka, salad basasha, kaabajka
yaanyada toonta, kaabajka, lettuce, caleenta digir, qajaarka, baradhada
qaanso strawberries, qajaarka, salaar, karootada, xididdo digirta, kaabajka, yaanyada
basbaas qajaarka, kohlrabi yaanyada, digirta
zucchini bean, dabocase, basasha qajaarka
"Dagaallada deriska ah"
Sida laga arki karo miiska kor ku xusan, marka lagu daro xaafad wanaagsan, waxaa sidoo kale jira xaafad aan loo baahnayn. Sida caadiga ah, dhirta waa "colaad" sababtoo ah u-hurin la'aanta maaddooyinka ay qarsoodi ah. Tusaale ahaan, walwalka madow wuxuu saameyn ku yeeshay khudaarta ugu badan sababtoo ah nuujinta ay soo saartey. Ma fiicna waa khudradda iyo xaafadaha qadhaadhka. Haddii aad ku beerato digirta iyo basashaada midba midka kale, labaduba waxay horumarin doonaan liidashada. Iyada oo fennel, macnaheedu waa dhammaan dhaqamada ay dareemaan dulmi, sidaa daraadeed waxaa ka fiican in ay warshad this si gooni ah ka soo dadka kale. Baradhada iyo qajaarka, yaanyada iyo strawberries sidoo kale waa kuwo liita. Eggplants iyo yaanyada ma jecla xaafadaha kale ee bidhaada ah, basbaaska iyo xididdo, kaabajka iyo strawberries lagama helo meel u dhow.
Ma taqaanaa? Waa mid xiiso leh in dhirta sida quruxda badan leh loo jecel yahay, sida geedka xayawaanka ah, ay saameyn xun ku yeelanayso dhammaan geedaha, taasina waxay sii jiraysaa muddo tobanaan sano ka dib geedkii lafdhabarka laftiisa la jaray.
Mararka qaar waxay dhacdaa in dhirta ay saameyn kala duwan ku yeeshaan midba midka ku xiran lambarkooda. Waxa la yiraahdo, waxaa jira daawo qaaddo, oo ku sumo koob. Xaaladdan, waxaad qaban kartaa xaafadaha dhaqan ahaan sida tiro yar, tusaale ahaan, dhinaca sariirta. Tusaale ahaan, tijaabin noocan oo kale ah waxaa lagu fulin karaa miisaaniyad, yar yar ama marabax, iyaga oo ku soo ururay kooxo yaryar oo u dhow khudaarta.
Sidaa darteed, waxaa muhiim u ah ninkii beerta ka shaqaynayay in uu ogaado waxa la abuurayo ka dib, iyo qorsheynta wanaagsan ee dalagyada beeraha waa hab lagu ilaaliyo ciidda ka timaadda dhirta iyo in dhirta laga caawiyo si dabiiciga ah midba midka kale u taageeraan koritaanka iyo horumarka.